मलेसियामा काम गरेको तलब माग्ने ५ नेपालीलाई जबर्जस्ति डिपोर्ट गरिदियो ! - ramechhapkhabar.com
मलेसियामा काम गरेको तलब माग्ने ५ नेपालीलाई जबर्जस्ति डिपोर्ट गरिदियो !
समाचार श्रोतका अनुसार ३ नेपाली ८ बर्ष यता उक्त कम्पनीमा कार्यरत थिए। आफुहरुले पाउनु पर्ने हिसाब नदेखाई तलब बाटै टिकट खरिद गरि नेपाल फर्काइएको छ। यद्यपि सम्झौता अनुसार रोजगारदाताले ३ बर्षे करार अवधी सके पश्चात् टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। संदेसप्रबाह बाट